TRF amin'ny fahitalavitra - The Reward Foundation - Fitiavana, firaisana ara-nofo ary ny Internet
Home TRF amin'ny fahitalavitra
Hatramin'ny tapaky ny taona 2016 ny CEO an'ny The Reward Foundation, Mary Sharpe, dia niseho tamin'ny fahitalavitra. Ireto ny sasany amin'izy ireo.
Ny sivy ao amin'ny BBC Scotland
Ny Reward Foundation dia faly tamin'ny fotoana niresahana ny asany tamin'ny fotoana nanasana an'i Mary Sharpe tao amin'ny The Nine tao amin'ny BBC Scotland TV. Ny entana amin'ny Alakamisy 5th Ny volana desambra 2019 dia momba ny fiakaran'ny herisetra ara-nofo sy ny fifandraisany amin'ny pôrnôgrafia. Nipoitra ihany koa ny olana momba ny lalàna momba ny Age Verification ary i Mary dia nahavita nanitsy ny diso momba ny vaovao diso niparitaka tao amin'ny BBC sy tamin'ny media tamin'ny ankapobeny. Ny fampiharana ny lalàna momba ny Age Verification izay voarakitra ao amin'ny Fizarana 3 amin'ny lalàna momba ny toekarena nomerika 2017 dia tokony hitranga amin'ity taona ity, saingy nahemotra fa tsy nilaozana. Raha ny marina, ny minisitry ny governemanta UK voarohirohy dia nanamafy tamin'ny fomba an-tsoratra fa ho ampiarahina amin'ny Bill Online Harms Bill, ka ny fahazoana mijery sary vetaveta amin'ny alàlan'ny tranokala ara-barotra sy ireo sehatra media sosialy dia voafetra ho an'ny olona mihoatra ny 18 taona ihany.
Ny fizarana dia natomboka tamin'ny fametrahan'ny mpanao gazety The Nine mpanao gazety Fiona Stalker ny fanontaniana Ny herisetra tsy ilaina mandritra ny fanaovana firaisana ara-nofo dia “ara-dalàna”? Tonga taorian'ny fisian'ny tranga heloka bevava marobe izay naheno ny fiarovana ny 'firaisana ara-nofo tsy nety'. Ny fikarohana natao tato ho ato dia mampiseho ihany koa ny isan'ny tovovavy miakatra izay iharan'ny herisetra tsy ilaina. Tsotra loatra ve ny manome tsiny ny pôrnôgrafia?
Studio host Rebecca Curran ary Martin Geissler avy eo nitafa tamin'i Mary Sharpe, filohan'ny The Reward Foundation ary mpanao gazety Jenny Constable, mba hijery ity olana sarotra ity. Mizara roa ilay horonantsary.
Ny vondrom-piarahamonina Scottish Gaelic dia nahita ny fandaharana voalohany natokana ho an'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny fandefasana azy ho ampahany amin'ny andiany An Sgrudaire (The Investigator) naseho tamin'ny 21 martsa 2019.
Niverina i Ruairidh Alastair miaraka amina fanontaniana maro hafa momba ny olana misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny tanora, ary mitady valiny izy amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ireo manam-pahaizana, mihaino ireo panelista anay ary manao fikarohana amin'ny alàlan'ny findainy sy ny fahendreny.
Amin'ity fizarana ity dia manadihady ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia izy ary izay mety manimba azy, amin'ny vanim-potoana izay tsy nanamora ny fidirana amin'ny pôrnôgrafia tamin'ny alàlan'ny fifandraisana Internet sy finday hafainganam-pandeha. Ny nalaina naseho dia ny fifanakalozan-kevitra nataon'i Ruairidh niaraka tamin'i Mary Sharpe avy amin'ny The Reward Foundation.
Niverina tamin'ny fahitalavitra i Mary Sharpe Nolan Live tao amin'ny BBC Irlandy Avaratra tamin'ny 7 martsa 2018. Niady hevitra momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana ananan'ny ankizy miaraka amin'i Stephen Nolan mpampiantrano miaraka amin'ny mpikatroka pôrnôgrafia ary mpidoroka pôrnôgrafia indray.
Mary Sharpe dia niseho tao amin'ny Nolan Live tao amin'ny BBC Irlandy Avaratra tamin'ny 19 Oktobra 2016. Niady hevitra momba izay hampianarina ny ankizy 10 taona izy miaraka amin'ny mpampiantrano Stephen Nolan sy ilay mpanoratra gazety any Londres Carol Malone. Mizara roa ilay horonantsary, manodidina ny 6 minitra 40 segondra.